IINGCAMANGO EZINGAMA-60 ZASEFROG ZETATTOO ZOLUNTU ZABANTU-IIYILO ZEAMPHIBIAN - UHLOBO
Iingcamango zeTattoo zaseJapan ezingama-60- [Isikhokelo sokuphefumlela sama-2021]
Isele liphethe indawo eyaziwayo kwinkcubeko yaseJapan, ke ayifani neyethu ngokubhekisele kwezi zidalwa.
Ekholelwa ukubamba amandla angenasiphelo okuchuma, ithamsanqa, kunye nentabalala yobomi, isele laseJapan livakaliswa njengothixo wemvula ngexesha le tsuyu kwaye liqinisekisa isivuno.
Ngobutyebi obuninzi bethamsanqa ekuvukeni kwayo, i-tattoo yesele yaseJapan yeyona totem igqibeleleyo yamadoda kuzo zonke iindlela zobomi.
Ihlala ibonwa kwimikhuba nakwimifanekiso eqingqiweyo engaphandle, isele laseJapan sisipho esithandwayo kunye nomzi ophambili wasekhaya, ethembisa ukubuya okuninzi kokonwaba kwabo babathandayo kunye nobutyebi. Ngelixa kungekho nto ithile yohlula isele laseJapan koogxa balo baseNtshona, abaninzi bakhetha ukuyirhangqa ngemiboniso yodidi lwaseAsia kunye neendawo zokuzonwabisa –amaza ajikelezayo, izixhobo eziqwalaselweyo, kunye nezityalo nezilwanyana ezahlukileyo.
Imibala eqaqambileyo kunye nemigca echazwe kakuhle iqinisekisa ukuba intsingiselo yesele laseJapan iviwe ngokuvakalayo nangokucacileyo, kuba apha akukho mgwebi wekhathuni mhle, kodwa uyimpembelelo nefuthe elinamandla. Umlingane wakho we tattoo uya kucoca inkunkuma kwindlela yakho, kwaye akugcine kwinkampani yabo bathetha eyona ilungileyo kuwe.
Isele laseJapan lisikhumbuza ukuba ezona zidalwa zincinci zincinci kwaye zinomtsalane zihlala zinika ezona zipho zimangalisayo, kwaye ungaze uthathe ubuso bempumelelo njengobunikiweyo. Onke amadoda anokuphakama ngaphezulu kweemeko zawo kunye nokusikelwa umda ukufezekisa oko babemiselwe kona, kwaye isele laseJapan liza kuhlala ecaleni kwakho kude kube nasemva kokuba eso sithembiso sizalisekisiwe.
Bona ngakumbi malunga - I-121+ yeengcinga zeTattoo zaseJapan eziphambili
kwimemori yothando yeetattoos zikatata
ingonyama enomvambo wesithsaba
I tattoo imibono yamadoda enentsingiselo
iindlela ezahlukeneyo zokubhala iiTattoos
sukunyathela kum tattoo
Eyona mlomo yeoli yindoda
yoyilo lwe tattoo engalweni
Uyilo locingo lweeyadi ezingaphambili
Umdlalo wetrone wetrone sleeve
kwigumbi lokuhlala imibono yokuhombisa indlu